कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २० गते बुधबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २० गते बुधबारको राशिफल !
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत १९, २०७५१६:०१ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७५ साल चैत २० गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ३ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चिल्लागा। चैत्र कृष्णपक्ष। तिथि– त्रयोदशी, १०:५४ बजेउप्रान्त चतुर्दशी। नक्षत्र– पूर्वभाद्रपदा, २७:२८ बजेउप्रान्त उत्तरभाद्रपदा। योग– शुक्ल, २२:०२ बजेउप्रान्त ब्रह्म। करण– वणिज, १०:५४ बजेदेखि भद्रा, २३:५० बजेउप्रान्त शकुनि। आनन्दादिमा पद्म योग। चन्द्रराशि– कुम्भ, २०:५३ बजेउप्रान्त मीन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:५५ बजे, सूर्यास्त– १८:२१ बजे र दिनमान ३१ घडी ०६ पला। पञ्चक। पिशाच चतुर्दशी (पाशाचह्रे पूजा)।
आज तपाइँको मित्र समूहको साथ आनन्द-प्रमोद गर्ने दिन रहेको छ । मित्रबाट उपहार मिल्नुको साथै मित्रको निम्ति धन खर्च पनि हुनेछ । नयाँ मित्रताको कारण भविष्यमा पनि लाभ हुन सक्छ । सक्न्तानबाट पनि लाभ हुनेछ । प्राकृतिक स्थलमा प्रवासको आयोजना हुन सक्छ । सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
आजको दिन नोकरी गर्नेहरुको लागी निकै शुभ रहेको छ । सफलतापूर्वक नयाँ कार्यको आयोजना गर्न सक्नु हुनेछ । शिर्ष अधिकारीहरुको कृपा दृष्टि रहनेछ । पदोन्नतिको संभावना छ । गृहस्थ जिवनमा मधुरता आउनेछ । अधुरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । सरकारी लाभ मिल्नेछ ।
नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्न अनुकुल दिन छैन । शारिरमा थकान र आलश्य रहने हुँदा कार्यमा उत्साह छाउने छैन । पेट सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ । नोकरी, व्यापारमा विपरित परिस्थितिहरु रहनेछन् । शिर्ष अधिकारीहरुको असन्तुष्टिको सामना गर्नु पर्ने हुनेछ । अधिक खर्च हुनेछ । महत्वपूर्ण कार्यको लागी कुनै निर्णय नलिनु होला ।
आज प्रत्येक विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ वाद-विवाद नगर्नु होला । वाणी तथा क्रोधमा संयम अपनाउनु होला । अधिक खर्च हुने सम्भावना छ । निषेधात्मक तथा अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनु होला । इश्वरको स्मारत तथा आध्यात्मिकता लाभदायक रहनेछ ।
वैवाहिक जिवनमा आपसमा खटपट हुँदा पति-पत्नी बीच तनाव हुनेछ । जिवन साथिको स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । आफ्ना भागीदार तथा व्यापारीहरुको साथ सहनशीलताले काम गर्नु होला । सम्भवत निरर्थक चर्चा या विवादमा नपर्नु होला । कोर्टको कार्यमा कम सफलता मिल्नेछ । सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्रमा यश मिल्दैन ।
स्फूर्ति तथा स्वस्थताको अनुभव हुनेछ । घर तथा नोकरी स्थलमा आनन्ददायी वातावरण मिल्नेछ । सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । रोगी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । कार्य सम्पन्नताको कारण यश मिल्नेछ । साधारण खर्चको अधिक अपेक्षा हुन सक्दछ ।
तपाइँको दिन मध्यम फलदायी रहनेछ । सन्तानको चिन्ताले सताउनेछ । विद्या अभ्यासमा वाधा आउनेछ । वाद-विवाद तथा वौद्धिक चर्चाबाट टाढा रहनु होला । नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्दा सफल हुन सक्नु हुँदैन । कोहि प्रियजनको साथ भेट हुनेछ । मानभंग हुन सक्दछ ।
शान्त चित्तले दिन बिताउनु होला । चिन्तित मन र अस्वस्थ शरीरले तपाइँलाई थप चिन्तित बनाउनेछ । सम्बन्धीको साथ मनमुटाव हुन सक्छ । आर्थिक हानीको संभावना छ । कुनै पनि प्रकारको दस्तावेज गर्न बाट सावधान रहनु होला ।
नयाँ कार्यको प्रारम्भको लागी शुभ दिन रहेको छ । भाई बन्धुहरुको साथ मेलजोलमा वृद्धि हुनेछ । परिवारजनको साथ प्रवासको आयोजना हुन सक्छ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । भाग्यमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । रहस्यवाद तथा आध्यात्मिकतामा अधिक रुचि हुनेछ । कार्य सफलताको दिन रहेको छ । सामाजिक दृष्टिबाट मान-सम्मान मिल्नेछ ।
आजको दिन परिवारको साथ कलहको प्रसङ्ग नहोस् यसको विशेष ध्यान राख्नु होला । वाणीमा संयम राख्दा समस्याको हल निस्कनेछ । स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । विद्यार्थीको पढाइमा अधिक ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपले प्रशन्न रहनु हुनेछ । भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिबाट राम्रो अनुभव हुनेछ । परिवारजनको साथ प्रवासमा सुरुचिपूर्ण भोजन तथा उपहार मिल्दा प्रशान् रहनु हुनेछ । आध्यात्मिक विचारले तपाइँको हृदय तथा मनलाई छुनेछ ।
लोभ र लालचमा नफस्नु होला । आर्थिक विषयमा निकै सावधानी अपनाउनु होला । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । एकाग्रतामा कमि आउनेछ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । परिवारजन संग मतभेद हुने सम्भावना छ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २५, शनिबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ८ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १० गते शुक्रबारको राशिफल !